Ny sidina avy any Doha, Qatar mankany Sofia, Bulgaria dia manamarika ny 10 taona nahombiazana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina avy any Doha, Qatar mankany Sofia, Bulgaria dia manamarika ny 10 taona nahombiazana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Momba ny Bulgaria • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny serivisy dia tantanan'ny Airbus A320 maoderina Qatar Airways izay misy seza 12 ao amin'ny Class Business ary seza 120 ao amin'ny Economy Class.
Qatar Airways hanohy ny sidina Doha mankany Sofia.
Qatar Airways dia hampiasa fiaramanidina Airbus A320 amin'ny lalana Qatar mankany Bulgaria.
Misy ny "fangatahana mafy" ho an'ny sidina eo anelanelan'i Doha sy Sofia.
Qatar Airways dia nanamarika dingana lehibe tamin'ny tantarany niaraka tamin'i Bulgaria, nankalaza 10 taona nahombiazana taorian'ny sidina voalohany teo anelanelan'ny Doha sy Sofia Airport (SOF) tamin'ny 14 septambra 2011.
Ny serivisy dia ampiasain'ny Airbus A320 maoderina Qatar Airways izay misy seza 12 amin'ny Class Business sy seza 120 ao amin'ny Economy Class. Ny tombony rehetra dia azon'ny rafitra fialam-boly fidirana an-dalambe malaza Oryx One.
Qatar Airways'Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: “Efa hatramin'ny ela izahay no nirehareha nanompo an'i Bulgaria ary nampifandray ity firenena tsara tarehy ity amin'ny tambajotram-pifamoivoizana manerantany. Fantatro rehefa nanomboka nanidina voalohany nankany Sofia izahay fa ity no fiandohan'ny fifandraisana matanjaka sy maharitra. Nandritra ny taona maro dia nanatri-maso ny tombontsoa azo avy amin'ny serivisinay ho an'i Bulgaria izahay izay mihoatra lavitra noho ny iraka nampanaovinay olona. Ny sidina nataonay dia nahafahan'ireo mpandeha eran'izao tontolo izao hiaina ny fandraisam-bahiny sy ny tantaran'ny kolontsaina Bulgaria sady manohana ny fanondranana ny vokatra Bolgara any amin'ny tsena any ivelany.
“Porofon'ny fitakiana mafy sy ny fanoloran-tenantsika lalina ho an'ny firenena ny hametrahana ny sidina mivantana eo anelanelany Doha sy Sofia, hatramin'ny Desambra amin'ity taona ity. ”
Ny talen'ny CEO ao amin'ny seranam-piaramanidina Sofia Jesus Caballero dia nilaza hoe: “Faly izahay fa manompo ny zotra Doha mankany Sofia izahay miaraka amin'ny mpiara-miasa Qatar Airways. Mamela ny mpanjifa sy ny fialam-boly hizaha ny renivohitray tsara tarehy any Bulgaria na ireo tanàna amoron-dranomasina any Varna sy Bourgas noho ny fizarana kaody misy eo anelanelan'ny Qatar Airways sy Bulgaria Air misy fifandraisana misy sidina avy any Sofia. Ny fiarahamiasa maharitra ataonay amin'ny Qatar Airways dia misy dikany betsaka aminay ary manantena ny fanamafisana izany indrindra amin'ny 2022 rehefa hatao any Qatar ny FIFA World Cup ™. ”
Ny sidina dia nanampy tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-barotra Bulgaria tao anatin'ny folo taona lasa ary ny Qatar Airways Cargo dia manome mihoatra ny 10 taonina ny entana isan-kerinandro isan-kerinandro, isaky ny sidina miasa amin'ny zotra.
Fahatsiarovana an'i Qatar Airways any Bulgaria:
2011 - Nanomboka nanidina tany Sofia in-efatra isan-kerinandro ny sidina tamin'ny alàlan'ny Bucharest, Romania tamin'ny alàlan'ny A320.
2012 - Fisondrotana sidina ho in-dimy isan-kerinandro.
2014 - Fanombohana asa fanompoana isan'andro eo amin'i Sofia sy Doha.
2015 - Ireo sidina dia nasiana fiatoana tany Belgrade, Serbia.
2016 - Nanomboka nitombo avo roa heny isan'andro ny sidina mivantana alohan'ny hanombohan'ny valanaretina.
2020 - Martsa, nanao sonia fifanarahana codeshare niaraka tamin'i Bulgaria Air i Qatar Airways.
2020 - Oktobra, manohy ny sidina Covid 19 ny sidina, toy ny marika miasa miaraka amin'i Bucharest, Romania.
2021 - Manomboka amin'ny 16 Desambra, ny sidina dia kasaina hijanona tsy an-kijanona avy any Doha mankany Sofia, inefatra isan-kerinandro.
Bulgaria dia nametraka fanamafisana lehibe tamin'ny fanarenana tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana avy amin'ny areti-mifindra, ary Qatar Airways dia manaiky ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fitarihana ny tontolo iainana mba hamonjy ny planeta misy antsika. Ny zotram-piaramanidina dia mikaroka hatrany ny fomba maharitra amin'ny sidina fiaramanidina, ary ny fampiasam-bolany amin'ny fiaramanidina mahomby indrindra - ao anatin'izany ny Airbus A350 sy Boeing 787 - manasongadina ny fanoloran-tenan'i Qatar Airways hahatratra ny famotsorana karbaona aotra net hatramin'ny 2050.
Fandaharam-sidina Sofia amin'izao fotoana izao: 7x isan-kerinandro (fandaharam-potoana eo an-toerana)
Doha (DOH) mankany Sofia (SOF) QR 395 miainga: 08:30 tonga: 15:35 (fijanonana iray any Bucarest mandritra ny adiny iray)
Sofia (SOF) mankany Doha (DOH) QR 396 dia miainga: tonga ny 16:35: 23:15 (fijanonana iray any Bucarest mandritra ny adiny iray)
Fandaharam-sidina Sofia Manomboka amin'ny 16 Desambra: 4x isan-kerinandro tsy miato (miankina amin'ny fanamafisana)
Doha (DOH) mankany Sofia (SOF) QR 227 miainga: 07:30 tonga: 11:35 tsy an-kijanona
Sofia (SOF) mankany Doha (DOH) QR 228 dia miainga: 12:35 tonga: 18:15 tsy an-kijanona